Xiisadda Trump iyo Ethiopia oo kasii dartay iyo Ethiopia oo tallaabo qaaday | Xaysimo
Home War Xiisadda Trump iyo Ethiopia oo kasii dartay iyo Ethiopia oo tallaabo qaaday
Xiisadda Trump iyo Ethiopia oo kasii dartay iyo Ethiopia oo tallaabo qaaday
Dowladda Ethiopia ayaa maanta u yeertay safiirka Mareykanka sababo la xiriira wax ay ugu yeertay “dagaal hurin” uu madaxweyne Donald Trump ka dhex sameeyey Masar iyo Ethiopia.
Madaxweyne Trump ayaa Jimcihii carro xooggan u muujiyey Ethiopia, isaga oo soo jeediyey in Masar ay burburiso biyo-xireenka ay Ethiopia ka sameysay Webiga Nile.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Ethiopia Gedu Andargachew ayaa ugu yeeray safiirka Mareykanka Mike Ray inuu sharaxaad ka bixiyo hadalladaas.
“Hurinta dagaal dhex mara Ethiopia iyo Masar oo uu sameeyo madaxweyne Mareykan ah, kama tarjumeyso saaxiibtinimada iyo isbaheysiga muhiimka ah ee Ethiopia iyo Mareykanka, mana ahan wax lagu aqbali karo xeerarka caalamiga ah ee lagu maamulo xiriirada dalalka,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Ethiopia.
Trump ayaa sheegay hadalka ka dhanka ah biyo-xireenka Ethiopia isaga oo ku dhowaaqayey heshiis ay xiriir ku yeelanayaan Israel iyo Sudan, oo sidoo kale cabsi xooggan ka qabta in biyo-xireenkaas uu yareyn doono biyaha ay ka hesho webiga.
Ethiopia, Sudan iyo Masar ayaa waxaa muddo ka dhaxeeyey muran xooggan oo la xiriira biyo-xireenka, kaasi oo Masar iyo Sudan ay diidan yihiin la buuxiyo, ayada oo aan heshiis rasmi ah laga gaarin.
Trump ayaa sheegay inuu heshiis dhex-dhigay dalalkan, balse ay Ethiopia ka baxday.
“Waa xaalad aad halis u ah, sababtoo ah Masar uma dulqaadan doonto, ay burburin doonaan, waana sheegay, si cadna waan u sheegayaa – Masar way burburin doontaa biyo-xireenkaas. Waana inay wax ka qabtaan,” ayuu yiri Trump.